အီသီယိုးပီးယားသည်အာဖရိကတိုက်ရှိရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနကိုအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနှစ်ခု - Afrikhepri Fondation ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်
Surplombant la capitale éthiopienne Addis Abeba, deux dômes de métal abritent deux télescopes ultra modernes. Le premier observatoire astronomique d’Afrique de l’est. Perché au sommet du mont Entoto et opérationnel depuis quelques mois, cet observatoire est une première étape vers le programme spatial dans lequel s’est lancé l’Ethiopie.
အီသီယိုးပီးယားသည်အလွန်တံခါးပိတ်ထားသောအာဖရိကနိုင်ငံများသို့နေရာဒေသအလိုက်ရည်မှန်းချက်ဖြင့်ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်သောနည်းပညာခုန်အောင်မြင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ တိုင်းပြည်တစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အီသီယိုးပီးယားအာကာသသိပ္ပံအသင်းမှ (Abinet Ezra) ကကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးသည်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များအားသိပ္ပံနည်းကျလမ်းကြောင်းများသို့သွားရန်အားပေးရန်ဖြစ်သည် (SSSA), နက္ခတ္တဗေဒ၏သီလကိုမြှင့်တင်ရန် 2004 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်အသင်းအဖွဲ့။
နက္ခတ္တဗေဒပါမောက္ခနှင့်လေ့လာရေးဌာန၏ဒါရိုက်တာဆော်လမွန်ဗေလေးအပါအ ၀ င်စိတ်အားထက်သန်သောလက်တဆုပ်စာဆယ်နှစ်နီးပါးမျှအာဏာပိုင်များနှင့်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲသည်မှာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများ၌ပင်ဖြစ်သည်။ Monde အာဟာရချို့တဲ့မှုရှိနေဆဲဖြစ်သည့်နေရာအာကာသကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းသည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာသေဆုံးသွားတဲ့အီသီယိုးပီးယားခေါင်းဆောင်ဟောင်း Meles Zenawi ကသူတို့ကိုအိပ်မက်ဆိုးမက်မက်သူတွေအဖြစ်မြင်ခဲ့တယ်။ လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအရူးလို့ထင်ခဲ့တယ် အစိုးရသည်အာကာသအစီအစဉ်ဖန်တီးရန်မဟုတ်ဘဲစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးကိုအဓိကထားခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းသည်အတားအဆီးမဖြစ်စေရဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ခဲ့သည်။ "ဒီအာကာသအစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုကိုသေချာစေဖို့တိကျမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်ရမယ်" ဟုခေတ်သစ်စိုက်ပျိုးရေးတွင်ဂြိုဟ်တုလေ့လာခြင်း၏အရေးပါမှုကိုလေ့လာရေးဌာန၏ဒါရိုက်တာကပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီ သိပ္ပံ နှင့်အင်ဂျင်နီယာရိုးရာစိုက်ပျိုးရေးကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး စက်မှုလုပ်ငန်း” ဟုသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင်ဤအာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးသည်သင်္ကေတများနှင့်နိုင်ငံ၏သိပ္ပံအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ အီသီယိုးပီးယား - ဆော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Mohammed Al-Amoudi ကဒေါ်လာ ၃ သန်းကုန်ကျပြီးရန်ပုံငွေ ၂ ခု၊ အချင်း ၁ မီတာအချင်းရှိပြီးကွန်ပျူတာဖြင့်ထိန်းချုပ်ပြီး spectrograph တပ်ဆင်ထားသည် ကျောင်းသားများအတွက် နက္ခတ်ဗေဒ နှင့်အက်ဒစ်အဘာဘာတက္ကသိုလ်မှနက္ခတ္တဗေဒပညာရပ်သည်ပြည်ပသို့သွားရန်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ဒေသအလိုက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အများပြည်သူလေ့လာရေးခရီးကိုဖွင့်ရန်လည်းစီစဉ်ထားသည်။ သို့သော်အခြေခံသုတေသနအရЭнတိုတိုဆိုသောနေရာသည်မိုးရာသီတွင်တိမ်များဖုံးကွယ်နေပြီးအလင်းအိမ်နှင့်နီးကပ်နေAddis Ababaအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကီလိုမီတာအနည်းငယ်သောင်းချီ, ထိုကဲ့သို့သောဆား (တောင်ပိုင်းအာဖရိကအကြီးစားအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း) အဖြစ်ကမ္ဘာ့အဓိက Observatory နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ် တောင်အာဖရိက။ ထို့ကြောင့်မီတာ ၄၀၀၀ ကျော်အမြင့်ရှိ Lalibela (မြောက်ပိုင်း) တောင်တန်းများတွင်ပိုမိုထိရောက်သောအာကာသစခန်းတည်ဆောက်ရေးကိုလေ့လာလျက်ရှိသည်။
ယခုအခါအီသီယိုးပီးယား၏အနာဂတ်အာကာသတွင်ရှိနေသည်ဟုယုံကြည်ပြီးအာဏာပိုင်များသည်အမျိုးသားအာကာသအေဂျင်စီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်နှင့်ငါးနှစ်အတွင်းအီသီယိုးပီးယားဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရန်စိုက်ပျိုးရေးမြေများနှင့်လေ့လာရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။ ဆက်သွယ်ရေး။ “ ကျွန်တော်တို့ဟာဆဲလ်ဖုန်းတွေအတွက်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်အတွက်အာကာသနည်းပညာကိုနေ့တိုင်းအသုံးပြုပါတယ်။ ဤရွေ့ကားနည်းပညာများအခြေခံဖြစ်ကြသည်။ အရှေ့ကိုနက္ခတ္တဗေဒသမဂ္ဂ၏ဒါရိုက်တာ Kelali Adhana ကပြောကြားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှလွတ်မြောက်ရန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာအဲသယောပိအာကာသယာဉ်မှူးကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်နည်း
Mekele Institute of Technology သည်အီသီယိုးပီးယား၏ပထမဆုံးဒုံးပျံအားကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်အထက်ကီလိုမီတာ ၃၀ တွင်စမ်းသပ်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ကမ္ဘာ့လေထုသည်ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကျော်ဝေးသည့်နယ်နိမိတ်နှင့်အလွန်ဝေးကွာသော်ငြားလည်းဘေးတိုက်ပျက်ပြယ်သွားစေသည်။ “ ကျနော်တို့အာကာသထဲကိုသွားဖို့မမြန်ပါဘူး” ဟုဆော်လမွန်ဗေလေးကအီသီယိုးပီးယားတွင်လူစီ၏တိုင်းပြည်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အာကာသအားလုံးပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
SOURCE မှ: http://www.sciencesetavenir.fr/espace/exploration/20150825.OBS4662/l-ethiopie-se-tourne-vers-les-etoiles.html
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနှင့်ကျန်းမာရေး၏အသစ် Malcolm X ကိုတက္ကသိုလ်ချီကာဂိုအတွက်ဖွင့်လှစ်
အော်စကာကသူ Sokar ရှေးခေတ်အဲဂုတ္တုပြည်၌အနုပညာရှင်များဘုရားကူးယူမလဲ
မိမိကိုယ်ကိုကုသပေးဖို့ 36 သဘာဝကကုစား
ဒီ page ကို share ပေးခြင်းဖြင့်ဒီ site ကိုလူသိများအောင်ကူညီပေးပါ
ဆောင်းပါးအားလုံးကိုသင်ဖတ်လိုလျှင် site ကိုတစ်ကြိမ်ဝေမျှရမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဤ ၀ င်းဒိုးသည် 13 စက္ကန့်အတွင်းအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်
သမတAfrikhepri ဖောင်ဒေးရှင်းမှWhatsApp ကို